8Yar (အိပ်ယာ): ကြောင်ပြပွဲ
Posted by 8Yar at 11:56 pm
မိုက်တယ်.. သွားချင်လိုက်တာ... နောက်ဆို အဲ့လိုလေးတွေရှိရင် ပြောပြနော်... အားရင်သွားရအောင်... :D
ကောင်းတယ် ၀မ်းသာတယ်း)ဟိဟိ
Candy<< Candy ကအဲ့လိုပွဲတွေ စိတ်ဝင်စားတယ်လား။ ဒီလိုမှန်းသိရင်ပြောပါတယ်။ နောက်ပွဲတွေရှိရင် အကြောင်းကြားပါ့မယ်ဗျာ။ စားပွဲသောက်ပွဲ ရှိရင်လဲပြန် အကြောင်းကြား လိုက်စားမယ်။ :P
မဒမ်ကိုး<< အောင်မရေးဂျ ကြောက်ပါပြီဂျ နောက်ကိုခေါ်ပါ့မယ်ဂျာ။ ဒီနေ့ ကံမကောင်းပါလားနော်။ :(
jasmine(တောင်ကြီး)<< အောင်မလေး မမ Jas ရယ် ကိုယ့်မောင်လေးကို နာရွက်ပါအဆွဲခံခိုင်းရက်တယ်။ ပြီးတော့ အမှုကြီးအောင်ရေးသွားသေးတယ်။ တော်တော် ရက်စက်ပါလားဗျာ။ တော်ပြီ ခေါ်တော့ဘူး ဒါဗြဲ။ :P
ကြောင်ပြပွဲလာကြည့်သွားတယ် 8Yar ရေ။
ဆုတံဆိပ်ကို အရောင်နဲ့ခွဲပြီး သတ်မှတ်တာလား? အဲဒီလိုပြပွဲမျိုးကိုရောက်မယ်မထင်ဘူး ခွေး ကြောင်မချစ်တတ်လို့း)
အမလေး ချစ်စရာလေးတွေ.. အိမ်မက်က အိမ်မှာ ကြောင် အကောင် ၂၀ လောက်နဲ့ကို နေခဲ့တာ ဒါကြောင့် ကြောင်မြင်ရင်သဲသဲလှုပ်ပဲ..
ကို 8 yar နောက်တစ်ခါသွားရင် တစ်ကောင်လောက်ခိုးခဲ့ပေးပါ..
ကြောင်ပြပွဲလေး လာကြည့်သွားတယ် ညီရေ...
ဒီလို ထူးထူးခြားခြား ပွဲလေးတွေက စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းမယ်နော်...
ယာယာရေ ကြောင်ပြပွဲလာကြည့်သွားတယ်နော်.... ပူးပူးကကြောင်ချစ်
တတ်တယ်...... ကြောင်လေးတွေအကုန်ချစ်တယ် နံပြားမျက်နှာနဲ့အဖြု
လေးက ပုပူးကြောင်နော် ကြိုယူပီပီ ဒါပဲ :P
နောက်တစ်ခါ သွားရင် ဘုန်းဘုန်းလည်း လိုက်ခဲ့မယ်နော်...ခေါ်မှာမလား
နံပြားမျက်နှာနဲ့ ဆရာကြောင်လေးကို သဘောကျတယ်။
mstint<< အန်တီတင့် ရေ ဆုတံဆိပ်တွေက ကြောင်အမျိုးအစား လိုက်ပြီးပေးတယ် လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမွှေးရှည်မျိုးကိုပေးတာက တစ်ရောင်၊ အမွှေးတိုမျိုးကို ပေးတာကတစ်ရောင်ပါ။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အိမ်မက်စေရာ<< တိန်! မအိမ်မက် အားပေးတာက ကြောတ်စရာကြီး။ ကျွန်တော့ကို အမှုဆင်နေသလိုပဲ။ :P ဟီး.. နောက်တာနော်။ ခိုးတော့မခိုးရဲဘူး တောင်းဆိုရင်တော့တောင်းရဲပါတယ်။ အထီးယူမှာလား၊ အမယူမှာလား ဆိုတာလေးတော့ပြောထားပေးနော်။
ညီရဲ<< လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်ကိုညီရဲ ရေ။ စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ် အစ်ကို။ ကျွန်တော်လည်း ပထမဆုံးသွားဖူးတာပါ။ :)
ဖဘက ကြောင်ချစ်သူသယ်ရင်းတွေအတွက် ဒါ့ပုံရိုက်ချင်လို့....:)
puupuu<< ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာ။ နံပြားမျက်နှာလေးနဲ့ ဆရာကြောင်ကို ပူးပူးကြောင်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်သောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။
nandasara.ashin<< တင်ပါ့ဘုရား။ အရှင်ဘုရား စိတ်ဝင်စားရင် ခေါ်ပါ့မယ်ဘုရား။ ကြွရောက်လာတဲ့ အတွက် အရမ်းဝမ်းသာပါတယ် ဘုရား။
မြသွေးနီ<< လာအားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း မျက်နှာပြားပြားနဲ့ကြောင်တွေ အများကြီးရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝါးနေလို့ မတင်တာပါခင်ဗျာ။ ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။
သမီးစံ<< ဟုတ်တယ်။ အစ်မပုံကိုလှအောင် ရိုက်မိလို့ ဗိုက်ကြော အလိမ်ခံရတာ။ :P အခုမှပဲပေါ်လာတော့တယ်။ ဘယ်တွေပျောက်နေတာတုန်း။
ညိမ်းနိုင်<< ဪဟုတ်ကဲ့ Cat Show က Chong Pang CC, 22 Yishun Ring Rd မှာပြသွားတာပါခင်ဗျာ။ 18-Sep-2011 နံနက် 10am ကနေညနေ 6pm ထိပါ။ face book မှာ ကြောင်ချစ်သူအသင်းရှိတယ်လာ။ အခုမှကြားဖူးလို့ပါ။ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ခင်ဗျာ။
အမှတ်တရ နေ့စွဲများ....<< ကြောင်ကိုပြောတာလား ဟင်?? :P လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အစ်ကို ရေ။
အသည်းယားလိုက်တာ.. ချစ်စရာလေးတွေ ..း)
အောက်ဆုံးက ပုံလေး ပိုသဘောကျတယ်
ကို8yarရေ ချစ်စရာလေးနော် ဂလု ဂလု.. p;p;p
ပထမဆုံးပုံလေးထဲက ကြက်ဥနှစ်ရောင် ကြောင်ဝါလေးကိုလိုချင်လိုက်တာ။ လှောင်အိမ်ထဲမှာ ခွေအိပ်နေတဲ့ကောင်လေးလေ။ ချစ်စရာလေး။ အမွေးရှည်ကောင်တွေက ကြည့်ရတာ ခန့်ခန့်ကြီးတွေ အပြင်မှာ အတော်ပဲများမဲ့ပုံ..း)
မိုးခါး<< အသည်းယား ရင်ကြောင်မမွေးနဲ့နော် ကြောင်ကကုတ်တတ်တယ်ခင်ဗျ။ :P
ဒုတ်ိယလူ<< ဂလု ဂလု..တဲ့ ချက်စားမလို့လား အစ်ကိုဒုရယ်။ ဟီး...။ :P
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy!<< ကျေးကျေးပါခင်ဗျာ။ အမြဲလာလို့ ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။
မအိမ်သူ<< လိုချင်ရင် ယူသွားလိုက်ဗျာ။ ဟီး... ကြောင်တွေအကုန်လုံး ပဲများကြတယ်ဗျ။